Fiatrehana ny rivodoza : Hohamafisina ny fiomanana -
AccueilSosialyFiatrehana ny rivodoza : Hohamafisina ny fiomanana
13/02/2018 admintriatra Sosialy 0
Mbola ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra tanteraka i Madagasikara amin’izao fotoana izao, ary mbola ao anatin’ny vanim-potoanan’ny rivodoza ihany koa. Araka ny voalazan’ ny sampana mpamantatra ny toetr’andro aza, dia hisy rivodoza mafimafy kokoa handalo eto amintsika amin’ity taona ity. Noho izany, hohamafisina ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny rivodoza, na ara-pitaovana, na arak’olona. Tanjona ny hampandraisana andraikitra ifotony ireo olona, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ny Bngrc. Amin’izao fotoana izao, dia misy ekipa 8 avy amin’ny Bngrc miparitaka manerana ny Nosy. Ankoatra ny fijerena ny simba vokatry ny fandalovan’ny Enawo sy Ava mba hahafahana manarina ireo simba afaka roa na telo herinandro eo, dia manomana ny olona ihany koa izy ireo. “Fa mbola tsy tapitra ny fahavaratra, ary tokony atao mafimafy ny fiomanana”, hoy ny sekretera mpanatanteraka ny Bngrc, Venty Thierrry.
Notontosaina omaly teny Mahazoarivo ny tatitra ofisialy taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo sy Ava, izay natrehan’ireo mpiara-miombon’antoka maro samihafa, toa ny Oms, Pnud, firenena mikambana sns… Fotoana nijerena ireo lesoka sy nakana lesona ihany koa mba hahafahana maka traikefa misimisy kokoa araka ny fanamarihan’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier. Ity farany izay nanambara fa efa ao anatin’ny politika ankapoben’ny Fitondram-panjakana ny fiatrehana ny loza voajanahary, toa ny rivodoza na ny voka-dratsin’ny tsimokaretina, satria efa manana rafitra ny firenena malagasy ahafahana miomana amin’ny loza, ka tafiditra amin’izany ny fanomanana ny olona. Fantatra nandritra ny famoahana ny tatitra omaly fa mitentina 21 tapitrisa Dolara ny vola nentina nanarenana an’i Madagasikara taorian’ny fandalovan’ireo rivodoza roa ireo. Ankoatra io, vola 700 000 Dolara ny fandraisana anjaran’ny sehatra tsy miankina. Raha toa ka olona 434 000 no voakasiky ny rivodoza Enawo, izay voafaritra ho rivodoza mafy indrindra nandalo teto Madagasikara tao anatin’ny 10 taona. Olona 161 300 kosa no voakasiky ny rivodoza Ava, araka ny tatitra voaray hatrany.